सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड क*मिसनका लागि यसरी गरे से**टीङ ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड क*मिसनका लागि यसरी गरे से**टीङ !
काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिदमा ७० क**रोड कमिसनका लागि सेटिङ गरेको प्रमाण हाम्राकुरा डटकमले प्राप्त गरेको छ।
७० देखि ७५ करोड क**मिसन आउँदा त्यसको ७० प्रतिशत कमिसन मन्त्रीलाई दिने प्रस्ताव सुनेपछि त्यो भनेको कति भनेर सोध्ने मन्त्री बास्कोटालाई उनले ५५ करोड जति कमिसन हुने प्रष्ट पारेका थिए।
-मन्त्री गोकुल बास्कोटाः त्यो मु..ले बनाएको त ३५ अर्बको छ। अब यता २७ अर्ब निस्कयो भने २८ अर्वको बनाउनुस!
अडियो सुन्नुहोस्: https://youtu.be/msp69cpbIPw
Previous १७ भाइ सम्पादकलाई दहालको प्र**हार : असली को*रोना भा*ईरस तिमिहरु हौ!
Next पढ्नुहोस् अनी शेयर गर्नुहोस्! महान दार्शनीक प्लेटोका विशेषोपयोगी १८ भनाईहरु!